१४ औ दलाई लामाले नेपाललाई रिस उठायो। | Dorje Shugden and Dalai Lama – Spreading Dharma Together
Posted on November 25, 2017 in Articles, Guest Writers, News · 22,110 Views · 221 Comments
Shashi Kei द्वारा लिखित
बुद्धधर्मिहरुका लागि दर्शन गर्नै पर्ने यहाँ चार तिर्थस्थल हरु छन् । त्यो मध्धे एउटा बुद्धको जन्मस्थान लुम्बिनी पर्दछ रा लुम्बिनी अहिले नेपाल भित्र पर्छ। सन् २४५ बि.सी. मा सम्राट अशोकाले त्यहाँ खम्बा उठाउँनका साथै शिलालेख गरि त्यो स्थललाई बुद्ध को जन्मस्थान पुष्ठी गरिको थियो। आज यो स्मारक योउनिस्को को विश्व बिरासत लाई अशोका को खम्बा भनि प्रसिद्ध रूपमा चिनिन्छ।
बुद्ध को जन्मस्थान लुम्बिनी हो भनि हरेक नेपाली ले गर्व गर्ने कुरा हो। नेपालीहरुले बुद्ध जयन्ति २१ मै मा मनायिने गर्दछ र यो एक पवित्र परम्परा हो जुन हिमालिय राष्टले मनाईन्छ। संसार भरका हजारौ मानिस हरु यो पवित्र उत्सव मनाउन लुम्बिनी आउने गर्दा छ।
तर 14 औं दलाई लामा को अनुसार यह सबै बकवास हो । राजधानी टीवी मा हालै जारी भको फुटेज, जसमा तिब्बती आध्यात्मिक नेता ले यस ऐतिहासिक तथ्य यसरि खारिज गरिदियो कि जसले नेपाललाई धेरै निराश र विचलित पारेको छ। यो झुठा विवरणले नेपाललाई साह्रै चिढाएको छ जहा नेपालले दयालु भई 60 बर्ष भन्दा बढि सम्म तिब्बती शरणार्थी समुदायलाई अाफ्नो देशमा स्थान दिएको छ।
यहा दलाई लामाले होस नपुर्याई बोलेको होकि अथवा केहि ध्यान नपुर्याई दिएको उनको बयान, धेरै कारणले अपमानजनक र हानिकारक छ।
नेपालले आफ्नै संघर्ष भएता पनि ३० हजार देखि ४० हजार सम्म तिब्बतीहरुलाई शरणार्थी को रुप मा उद्दार गरिएको छ। यो संङ्ख्या तिब्बतेनहरु को तेस्रो समूह हो र नेपाल भरि करिब १२ ओटा तिब्बतेन शरणार्थीको क्याम्प हरु छन् । सन् १९८९ अघि नेपाल छिरेका तिब्बतेनहरु लाई देशको आर्थिक तथा सामाजिक एकीकरण बाट धेरै लाभ प्राप्त भएको छ। धेरै तिब्बतेनहरुले कारोबार गरे र कसैले पसल तथा रेस्टुरेन्ट खोले र प्रत्येक वर्ष आउने पर्यटक हरुको त्यहा भिड देख्न पाईन्छ। नेपालमा उनीहरुले आफ्नो तिब्बतेन गुम्बा हरु पुन: स्थापना गर्न सक्षम थिए र त्यसैले तिब्बतेन को पहिचान र परम्परा को अस्तित्व रहनु मा नेपाल को ठुलो योगदान रहेको छ भन्दा गलत नहोला । तर अझै, तिब्बती नेतृत्वले नेपालको आमुल्य गौरवको श्रोत लाई बरखास्त गर्दै गुण तिरी रहेको छ।
सन् 1959 मा चीन-नेपाल सिमानाको माध्यमबाट पहिलो पटक निर्वासित प्रवेश गरेदेखि नेपालका तिब्बती शरणार्थीहरूले आफ्नैलागि धेरै राम्रो काम गरेका छन्। नेपालका गरिब स्थानहरूमा पनि उनिहरूका घर तथा गुम्बाहरू सुनका छानाले सजिएको र बाहिर जति राम्रा हुन्थे, भित्रपनि उत्तिकै सजिएको हुन्थो। नेपालमा 2015 मा गएको भूकम्प पछि, तिब्बती मन्दिरहरू प्राय: पहिले पुनर्निर्माण गरियो र विश्वभरबाट प्राप्त भएका दानहरूको लागि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहान्छै। यसबाहेक नेपाली जनताहरूले बढी स्थायी आश्रय प्राप्त गर्नुअघि केहि महिना सम्म त बाहिर सडकमा संघर्षका साथ जिवन जिउनु पर्यो। त्यो बेला दलाई लामाको केहि संमुहले भूकम्प पीडितहरुको नाममा दान रकम संकलनक गरे तर ति पैसा सबै उनिहरु अाफै राखे।
दलाई लामा का बयान नेपाली अर्थव्यवस्था को लागि धेरै हानिकारक हो। आध्यात्मिक पर्यटन नेपाल मा सबैभन्दा ठूलो उद्योगों हो। र यो विदेशी मुद्रा र राजस्वको एक महत्वपूर्ण स्रोत अनि लुम्बिनि जस्तै पवित्र स्थलहरु मा कुनै संदेह छैन। तिब्बती शरणार्थिहरु आफैले पनि नेपाली पर्यटक उद्योग मा निर्भर र भरोसा राख्नुको साथै ग्राहकहरुलाई विभिन्न व्यवसायमा आकर्षित गर्न सकिन्छ। त्यसकारण जब दलाई लामा ले यस प्रकारका आधारहीन बयान दिएपछी, यसले नेपालको आध्यात्मिक पर्यटनको विश्वसनीयतालाई कमजोर बनाउँछ। संसारमा धेरै व्यक्तिले दलाई लामा लाई बौद्ध धर्म र बौद्ध धर्मका सबै अधिकारहरूको प्रमुख मानिन्छ, त्यसैले उहाँ यस बारेमा सही हुनुपर्छ। अन्ततः यदि दलाई लामा ले भनेको अनुसार हो भने नेपालले बुद्ध नेपालमा जन्मेको हो भनि दाबी एक धोखाधडी बयान हुन्छ र नेपाल लाई ठुलो नोकसान पुग्नेछ।
वास्तवमा, दलाई लामा र उनको सरकार, केन्द्रीय तिब्बत प्रशासन (सीटीए जो धर्मशालामा आधारित छ) नेपाल को भलाइ मा कम रुचि देखाइएको छ। नेपालमा हालै गएको भूकम्पको क्रममा सीटीएले दुख व्यक्त गरेको एउटा सरल बयान जारी गर्नका साथ उद्धार र राहत का लागि नेपाललाई 20 लाख रुपैयाँ (कम्तीमा 32,000 अमेरिकी डलर बराबरको) प्रस्ताव गरे र नेपाललाई प्रार्थना गर्ने प्रतिज्ञा गरे। यो अनगिन्ती लाखौंको तुलनामा एक बिन्दु हो । सीटीएले वार्षिक रूपमा सरकारी अनुदान, सार्वजनिक सहायता र दान प्राप्त गर्दछ। वास्तवमा, सीटीए यो दान को प्रस्ताव गरिरहेको बेला, दलाई लामाका सहयोगीहरु को केही पीडितहरूले भूकम्पको लागि उठाउन नेपाल भूकम्पको प्रयोग गरे, तर पैसा भुक्तानी गर्न असफल भए। तिनीहरूका बैंक खाता अस्थायी रूपमा रोकेको थियो। तिब्बत सरकारले आफ्नो साथीहरूबाट के प्राप्त गर्न चाहान्छ भनि यो स्पष्ट रूपमा देखाउँछ र अन्य राष्ट्रका मानिसहरूलाई कसरी योगदान गर्नु पर्छ भन्ने कुरामा अधिक चासो गर्दैन।
केही तिब्बती पसलहरू विश्व प्रसिद्ध बौद्धनाथ को वरपर छन्। हजारौं पर्यटकहरू हरेक दिन यो युनेस्को विश्व विरासत स्थल भ्रमणमा आउने गर्दछन र त्यहाँ धेरै धनी तिब्बती व्यवसायहरू बाट खरीदारी गर्दै उनिहरूलाई सहायता गर्छन। तिब्बती शरणार्थि हरुको विरुद्धमा हाल साल तनाव बढेको छ, जसले सबै भन्दा राम्रो व्यापारका स्थलहरु लिएर स्थानीय नेपालीहरूको गरिखाने ठाउ कब्जा गरिएको र अरू नेपालीले बेच्ने दाम भन्दा कम मुल्यमा बेचेको आरोप लागेको थियो।
दलाई लामाको बयानले बुद्धको जन्म देशको दावीमा भारत र नेपाल बीचको लामो समयसम्मको वादबिवाद लाई शासन गर्दछ। दलाई लामाको लागि यो मुद्दा उठाउन र पुरानो चोटहरू पुन: खोल्नको लागि यो पूर्णतया अनावश्यक थियो। विशेषगरि जब आध्यात्मिक नेता दुवै भारत र नेपाल दुवैको कृतज्ञताको उहालाई ऋण छ। यो विशेषगरी एउटा कूटनीतिकता को साह्रै कमजोर क्रिया हो भनि जनाऊछ । जब चीनले खुल्लमखुल्ला नेपाल संग व्यापार र महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे को निर्माण गरिरहेको छ। यस तरिकाले नेपाललाई रिस उठाएमा अझ नेपाल चीन सँग नजिकीन पुग्नेछ, जसबाट नेपालले व्यापार सम्बन्धी सम्बन्धहरू खोलेर धेरै लाभ उठाउन सक्नेछन्। अन्ततः नेपालका आधा शताब्दीको योगदान र सहयोग पछि पनि तिब्बतका मानिसहरू अविश्वसनीय र अपमानजनक छन् भने स्पष्ट रूपमा देखाउँछ।
नेपाली राष्ट्र उदास हुनु एकदम जायज छ। दलाई लामा एक प्रमुख राजनेता र बुद्धि र दया संघको एक वरिष्ठ धार्मिक व्यक्ति भएको हुनाले आफ्नो शब्दहरु को शक्ति देखि सजग हुनु पर्ने हो । उहाँ संसारको सबैभन्दा आकर्षक व्यक्तिहरू मध्ये एक हुनुहुन्छ र, सहि वा गलत रूपमा, एक विश्वसनीय व्यक्ति हो। सबैले देखेका छन् कि दलाई लामाले सदीयो पुरानो परम्परा दोर्जे शुग्देनको अभ्यासलाई नष्ट गर्न कुनै प्रमाण वा व्याख्या प्रस्तुत नगरी राक्षस उपासनाको घोषणा गरियो । र अब, उस्तै उपेक्षा नेपालीहरूलाई पनि देखाउदै छन्।
किन तिब्बती नेतृत्वले नेपाल राष्ट्रलाई यो पीडा दिएको भनि केहि औचित्य छैन । दलाई लामाको बिरोधमा नेपाली जनताको क्रोध उचित छ। नेपालीहरू तिब्बती शरणार्थीहरूका लागि धेरै उदार र सहनशील भए। कम से कम कि तिब्बत नेतृत्वले नेपालको इतिहास र संस्कृति को सम्मान गर्नु पर्ने थियो।
हरेक वर्ष नेपालमा तिब्बती शरणार्थीहरूले चिनियाँ सरकारको विरुद्ध विरोध प्रदर्शन गर्छन र नेपाल प्रहरीको अाफ्नै काम छोडि उनिहरूलाई पहरा दिन बाध्य पार्छन। यी विरोधले चीनसँग नेपाल को सम्बन्धमा नकारात्मक असर पारेको छ। के अब तिब्बती शरणार्थि हरुले अाफ्नो नेपाली समुदाय माथी यसरी अाभार व्यक्त गर्ने ? छिमेकी देश को अर्थव्यवस्था र अन्य राष्ट्रहरूसँग को सम्बन्धलाई प्रभावित गरेर? या अाफ्नो स्थानीय जनताले प्राप्त गर्नु पर्ने सहायतालाई नष्ट गरी?
नेपालीहरू पहिले नै धेरै उदास भएका हुनाले तिब्बत नेतृत्वले भविष्यमा नेपाललाई अझ बढी संवेदनशीलता सँग व्यवहार गर्नु पर्दछ। तिब्बत नेतृत्वले अन्य अरू समूहहरूको विपरीत अपमानजनक गरेको छ भने नेपाल सरकारले यस विषयमा पुनर्वितरणमा गर्न सक्दछ। उदाहरणका लागि, सीटीए अथवा तिब्बत नेतृत्वले अब हिमालय क्षेत्रमा आफ्नो अर्को बलियो सहयोगी गुमाउन सक्छ। चीनले पहिले नै नेपाललाई मित्रताको हात लम्ब्याई रहेको छ र अब दलाई लामाको यो बयानको कारणले नेपाली र नेपाल सरकारलाई तिब्बती सँगको सम्बन्ध राख्नाले केहि फाइदा छैन भन्ने देखाउ छ। केवल नतिजा अधिक दु: ख, अपमान र हिंसा हुनेछ।
यसको विपरीत, चिनसँगको सम्बन्धले राष्ट्रको लागि वित्तीय र व्यापारिक फाइदाहरू, साथै पूर्वाधार सुधार र आर्थिक विकासको परिणाम पाउँछ। सीटीए पनि तिब्बती शरणार्थियों को उपस्थिति सम्झन मा विफल रहेको छ जहा तिब्बती शरणार्थि नेपाल सरकार को निरंतर संरक्षण मा पूरै निर्भर छ। उनीहरूको समर्थन छैनभने, तिब्बतीलाई कुनै पनि दिन देश छोड्न अनुरोध गर्न सकिन्छ। सिटिए कति लामो समय सम्म अरूको दयामा निर्भर रहन सक्छ, जबकि उनीहरूले अरूलाई रिस र अपमान गर्छ? CTA कति सम्म यस तरिकामा बाँच्न सक्छ? यस्तै हो भने ‘धेरै लामो सम्म सक्दैन।
बुद्ध भारतमा जन्मिएको हो, नेपाल मा होइन भन्ने दलाई लामाको बयानमा नेपालीहरूले यस प्रकारको प्रतिक्रिया दिदैछन। तपाईंले देख्न सक्नु हुन्छ, नेपालीहरू धेरै उदास भएका छन् र आधिकारिक समाचार च्यानलहरूमा र साथ-साथै सोशल मिडिया को अनलाईन प्लेटफार्म मार्फत नेपालीहरू दुखी भएका कुरा व्यक्त गरिरहेको छ। दलाई लामाको बयानका भिडियोहरू प्रचलित गरि व्यापक रूपमा शेयर गर्दैछन्। तल नेपालीहरूको प्रतिक्रियाको थुप्रै उदाहरणहरू देख्न सक्नु हुन्छ। यस देशका शान्तिपूर्ण नागरिकहरू, हाल तिब्बत को नेतृत्व र दलाई लामाको विरुद्धमा उत्रेका छन्।
विस्तार गर्न क्लिक गर्नुहोस्
The opinion piece above was sent to dorjeshugden.com for publication. We accept submissions from the public, please send in your articles to [email protected].
Related Topics: buddha, Dalai Lama, nepal
The 14th Dalai Lama Angers Nepal Next
What Happens to Dorje Shugden Lamas?
221 total comments on this postSubmit yours
Did Tsem Tulku's Protector FAILED to heal him!!!
Why the lack of public information on Tsem Tulku's death by his Ladrang?
January 16, 2010 ·0Comments The Dalai Lama’s ‘Research’ Concerning Past Masters and Dorje Shugden
November 6, 2013 ·0Comments H.H. Panchen Rinpoche’s Advice
July 17, 2012 ·0Comments The History of World Religions
February 21, 2009 · 1 Comments Dalai Lama and the CIA
January 31, 2013 ·0Comments A Weekend Dharma Celebration
March 25, 2012 ·0Comments Taktse Dupcho at Shar Gaden Monastery
May 25, 2020 Tibetans reject Tibetan leadership
May 21, 2020 Dorje Shugden in Mongolia (Guru Deva Rinpoche)
May 20, 2020 Sacred Mantras
May 17, 2020 The Benefits of Dorje Shugden’s Practice
United States 2,756,226 India 633,331
Nepal 589,724 Bhutan 391,315
United Kingdom 319,357 Myanmar (Burma) 230,202
Canada 209,319 Germany 208,687
Brazil 186,518 France 175,238
Philippines 160,144 Singapore 158,145
Malaysia 145,783 Cambodia 134,534
Turkey 130,511 Bangladesh 125,004
Italy 119,075 Indonesia 111,538
Switzerland 100,908 Thailand 89,963
Australia 88,273 Pakistan 87,641
Spain 84,908 Mongolia 81,217